नेपालको साइबर सुरक्षा कमजोर किन ? | Suvadin !
साइबर सुरक्षा कमजोर हुनुमा आवश्यक नीति तथा कार्ययोजनाको अभाव, सुरक्षामा कम लगानी र नियमित सुरक्षा परीक्षण नहुनु प्रमुख तीन कारणहरू रहेको बताइन्छ। साइबर सुरक्षा विज्ञ सरोज लामिछानेका अनुसार यस्ता घटनासँग जुझ्नका लागि सरकारले तत्काल नीति र पद्धति बनाउनु पर्छ।
लामिछाने भन्छन् - 'यस्ता किसिमका खतराबाट जोगिन निश्चित अवधि तोकेर योजना बनाउन आवश्यक छ र साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जरूरी छ।'
काठमाडाै, जेठ १५ - केही साता अघि करिब दुई हजार सरकारी वेबसाइट ह्याक भएर चार घण्टा बन्द भएपछि नेपालको साइबर सुरक्षामा प्रश्न उठेको छ। सरकारी निकायहरूले वेबसाइटहरू राखिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा ह्याकरहरूको हमलाले साइबर सुरक्षाको कमजोर अवस्था देखाएको विज्ञहरूको मत छ।
सो घटना ठूलो रहेको र यसबाट पाठ नसिके भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा समेतमा खतरा बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। घटनापछि साइबर सुरक्षाका लागि थप सतर्कता अपनाउन सुरू गरिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिका उपकरण खरिदका लागि मापदण्ड बनाइनुपर्ने उनको सुझाव छ। विश्वव्यापीरूपमै प्रविधिको प्रयोग बढ्ने क्रममा रहेको अवस्थामा नेपालले पनि समयसापेक्ष नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
'नेपालका लागि साइबर हमला तत्कालिन अवस्थामा ठूलो विषय जस्तो नदेखिए पनि यस्ता विषयमा गम्भीर नहुने हो भने एकै पटक ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ, उनले थपे।